#IBCShow 2016: LAWO ၏ Virtual Mixing ဆော့ဝဲRƎLAY! NAB Show ကိုတိုက်ရိုက် - - အသံလွှင့်ဘိ, NAB ပြရန်၏တရားဝင်ထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြင့် NAB ပြရန်သတင်းများ
Home » အသားပေး » #IBCShow 2016: LAWO ၏ Virtual Mixing ဆော့ဝဲRƎLAY!
#IBCShow 2016: LAWO ၏ Virtual Mixing ဆော့ဝဲRƎLAY!
Lawo's အဆိုပါဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် RƎLAY virtual ရေဒီယိုရောနှော ရေဒီယို၏ကမ္ဘာပေါ်မှာတစ်ဦးအောင်မြင်မှုများနည်းပညာနှင့်တိုးပါ! RƎLAY ပစ္စည်းကိရိယာ၏တစ်ခုလုံးကိုထိန်သိမ်းအစားထိုးရန်က virtual အစိတ်အပိုင်းများကို built-in အပေါငျးတို့သရှိပါတယ်။ တစ်ဦးက PC နဲ့ breakout သေတ္တာနှင့်အတူအဆုံး-အသုံးပြုသူများကိုထောကျပံ့ခြင်းနှင့်ထောက်ပံ့ပါလိမ့်မယ် virtualized ကုဒ်ပြောင်းကိရိယာများ, ဖုန်း hybrids တွေကို, အသံပရိုဆက်ဆာ Cross-အမှတ် router များ, streaming များကုဒ်မြှပ်သွင်းကိရိယာများနှင့်ဆော့ဖ်ဝဲလုံးဝကို run သောအခြားအသံလွှင့် tools တွေ, စံ WDM သို့မဟုတ် ASIO interfaces မှတဆင့်ရောနှောနှင့်အတူ interfacing ။
အခုတော့ရေဒီယိုအသင်းများကိုတစ်ခါတည်းဆွဲယူခြင်းနှင့်ဝေးလံခေါင်သီသောလယ်ပစ္စည်းများသွားပါ, On-တည်နေရာ Setup နှင့် webcasts များ၏လွယ်ကူခြင်းအတွက်အဆုံးစွန်ရှိသည်။ setup ကိုမိနစ်ကြာ, ဒါမှမဟုတ်တကယ်ပဲ, ကသင့်ရဲ့ PC မှာဖွင့် boot လိမ့်မယ်ဘယ်လောက်မြန်မြန်မူတည်ကြောင်း, ဒီစနစ်ကဒါခရီးဆောင်ကြောင်းကိုငါသိ၏ ကျေးဇူးပြု. ! RƎLAY ဆော့ဗ်ဝဲနဲ့ Windows အတွက် 10 လက်ပ်တော့ဒါမှမဟုတ် desktop PC နဲ့အထုပ်များပေါ်တွင်အလုပ်လုပ် RƎLAY VRX4 နှင့် VRX8 ကျစ်လျစ်နှင့်အတူတွဲ (4- နှင့် 8-fader ရောနှော) ဆော့ဖ်ဝဲ, Lawo မိုက်ကရိုဖုန်းလိုင်း, AES4 နှင့် RAVENNA / AES3 I / O ထောက်ပံ့ဖို့ OnAir 67 အသံ interface ကို။ ဒါ့အပြင်ထည့်သွင်းမယ့်လက်ပ်တော့များအတွက်အာကာသနှင့် MICS နှင့်နားကြပ်ကဲ့သို့အခြား On-ဝေဟင်ဆက်စပ်ပစ္စည်းအတူမိုးသည်းထန်စွာ-တာဝန်RƎLAYကျောပိုးအိတ်ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအတော်လေးအထင်ကြီးကို virtual software ကိုမှတံခါးသော့ကိုအင်္ဂါရပ်များပါဝင်သည်:
virtual ရေဒီယိုရောနှောစံကို PC ပေါ်တွင် run
အလင်းနှင့်ခရီးဆောင် - ဘယ်နေရာမှာမဆိုတတ်
မိုက်ကရိုဖုန်းလိုင်း & ဒစ်ဂျစ်တယ်ငါနှင့်အတူ A__OnAir4 စတီရီယို interface ကို / O
Open-source ကိုမီးတောက် + ထိန်းချုပ်မှု protocol ကိုမှတဆင့် GPIO
AES67 / RAVENNA လိုက်နာ
4-fader & 8-fader ဗားရှင်း
ဇာတိ PC ကိုအသံဖိုင် (ASIO, WASAPI, WDM, MME) ကိုအထောက်အပံ့ပေးနိုင်ပါတယ်
Talkback နှင့်အတူရောနှော-အနုတ် (သန့်ရှင်းတဲ့အစာကျွေးခြင်း)
အသုံးပြုသူ shortcuts တွေကိုနှင့်ရောနှောရိုက်ချက်၏ on-screen ထိန်းချုပ်မှု protocol ကိုထိန်းချုပ်ဖို့
Plug-in ကို software ကို apps များ - အပြောင်းအလဲနဲ့, ပလေးအောက်, codec, ဖုန်းများနှင့်ပိုပြီး
ကနေ PC ကိုထောက်ခံချက် LAWO run ဖို့ RƎLAY အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်: Intel က core-i7 Quad-core စက်တွေ / 4GB RAM နှင့်တစ်ဦး 1TB hard drive ကိုလည်းသတိရဖန်သားပြင်မထိကြောင်းအသုံးပြုမှုလွယ်ကူခြင်းအဘို့အသငျတို့သ app အချို့ run ဖို့စီစဉ်နေပါတယ်နှင့် VSTs- RAM ကိုအတူက load လုပ်ဖို့သတိရလျှင်ပိုမိုနှစ်သက်ကြသည်! ဒါ့အပြင်သင်တို့သည်ဤအပြည့်အဝအလုပ်လုပ်တဲ့ software ကိုဗားရှင်း add-ons တွေကိုအကဲဖြတ်နိုင်အောင်အခမဲ့သရုပ်ပြဗားရှင်း checkout ဖို့သေချာပါစေ! ဤနေရာတွင်ကြည့်ရှု: www.r3lay.com/collections/evaluation-software
သွားရောက်ကြည့်ရှုဖို့သေချာပါစေ LAWO at တဲ 2016.B8 မှာ IBC ပြရန် 50 နှင့်တစ်ခုတက်နှင့်နီးစပ်ထုတ်ကုန်သရုပ်ပြတွေ့မြင် RƎLAY!
Lawo တစ်ထုတ်လွှင့် application များအတွက်ရှေ့ဆောင်ကွန်ယက်အသံ, ဗီဒီယိုနှင့်ထိန်းချုပ်မှုနည်းပညာများ၏ဦးဆောင်ထုတ်လုပ်သူအဖြစ်တိုက်ရိုက်စွမ်းဆောင်မှုနှင့်ပြဇာတ် applications များဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီ၏ကျယ်ပြန့်ထုတ်ကုန်များ၏အကွာအဝေးနှင့် IP အခြေခံအဆောက်အဦများဖြေရှင်းချက်ဦးဆောင်ထုတ်လွှင့်, မိုဘိုင်းထုတ်လုပ်မှုကုမ္ပဏီများနှင့်ကမ္ဘာ့အဓိကအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအားကစားနှင့်တိုက်ရိုက်စွမ်းဆောင်ရည်ဖြစ်ရပ်များအားဖြင့်အသုံးပြုသွားမည်နေကြသည်။ IBC မှာဥရောပ Premiere ခုနှစ်, Lawo ယင်း၏ V__matrix software ကို-သတ်မှတ်ထားသော IP ကို-လမ်းကြောင်းနှင့်အပြောင်းအလဲနဲ့ပလက်ဖောင်းများနှင့်သစ်ကို R50LAY ရဲ့ Virtual ရေဒီယိုရောနှောတင်ပြပါလိမ့်မယ်, (B8, ခန်းမ3ရပ်) ။ ဒါ့အပြင် display ကိုအပေါ်: အဆိုပါ VSM ထုတ်လွှင့်ထိန်းချုပ်မှုနှင့်ဗီဒီယိုကိုစီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်စနစ်, theWALL မြင်ကွင်းစုံထိန်းချုပ်မှုစနစ်, နာမည်ကျော်mc² consoles စတဲ့အပြည့်အဝအဖြည့်, Nova routers နှင့် A__line အသံ-to-IP ကို ​​interfaces အဖြစ် V__line ကဗီဒီယိုသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အပြောင်းအလဲနဲ့ဖြေရှင်းချက်စောင့်ကြည့်, အရည်အချင်းပြည့်မီသည် IP WAN ဆက်သွယ်မှုမှတဆင့်အသံနှင့်အင်တာကွမ်းဆက်ဆံရေးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်ထိန်းချုပ်မှု။
ထုတ်လွှင့်မဂ္ဂဇင်းသည်သင်၏ Beat #1 အဆိုပါ 2016 IBC Show ကိုဖုံးအုပ်အားလုံးကိုနောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာသတင်းနှင့်စာနယ်ဇင်းထုတ်ပြန်ပြောကြားချက်များရွေးချယ်မှု!
ထုတ်လွှင့် Beat မဂ္ဂဇင်း ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထိန်းချုပ်ရေးစနစ် ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ်	2016-07-18
ယခင်: အာဒံကအသံအမေရိကန်နောက်ထပ် 2.2 နှင့် 5.1 နှင့် 5.2 ပတ်ပတ်လည်အထုပ်များနှင့်အတူ၎င်း၏အောင်မြင်သောု့ကပ်ရေးနှင့် subwoofer Bundle ကိုအစီအစဉ်များတိုးချဲ့ခြင်း
နောက်တစ်ခု: GPL Technologies က, NVIDIA SIGGRAPH 2016 မှာ Virtualization နှင့်နက်ရှိုင်းသောသင်ယူ Tools များပြရန်မှ